SOICARE seramiiki na osisi siri ike ntụ oyi aromatherapy humidifies mkpa mmanụ diffuser, China SOICARE seramiiki na osisi siri ike jụụ aromatherapy humidifies mkpa mmanụ diffuser Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
SOICARE seramiiki na osisi siri ike jụụ aromatherapy humidifies mkpa mmanụ diffuser
Disinfection, Icho mma
10 nke 20-XNUMXpm
· MINIMALST Design with Nature TEXTURE: E mepụtara SOICARE dị mkpa mmanụ na-ekpo ọkụ na humidifier na Denmark maka ọdịdị na mmụọ na mmụọ Minimalist. Ọ na-abịa site na eco-friendly seramiiki n'elu na osisi siri ike ụkwụ. Ọ dị njikere ịgwakọta nke ọma na ndozi ọ bụla nwere nhọrọ 3 agba.
· MUTEPLE timer Nhọrọ: SOICARE mkpa mmanụ diffuser na humidifier nke emere na 4-INTERVAL TIMers: 1hr, 3hrs, 6hrs, na Mgbe niile. Ejiri aghụghọ gosipụta ihe ngosipụta ihe na-egosi oge.
· Ogologo ogologo oge: SOICARE dị mkpa mmanụ na-ekesa mmiri na humidifier na-abịa na mmiri 180ml nke na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ísì ụtọ na-enweghị ọkụ ọkụ na-emeghe na ọnọdụ 2 MIST: Ọnọdụ na-aga n'ihu na-enye 10 awa nke aromatherapy kpụ ọkụ n'ọnụ, Ọnọdụ nkwụsị ((30 sec ON, 30 sec Gbanyụọ)) na-enye na-adịgide adịgide maka awa 20 na sentụ dị nro.
· TAILORED FOR LIGHT ụra: SOICARE mkpa mmanụ diffuser na humidifier ga-eme ka NO nku. Nwere ike ịhọrọ iji ya na-enweghị ọkụ ON. SOICARE dị mkpa mmanụ diffuser na-arụ ọrụ ULTRA-QUIETLY, n'ihi ya, ọ bụ sonso kwesiri ngosi ọbụna n'oge abalị.
· Mfe iji na ịnọgide na: SOICARE mkpa mmanụ diffuser na humidifier bụ bụghị naanị kpamkpam BPA-FREE, kamakwa engineered iji mkpa mmanụ n'ụzọ dị irè. Ihe mgbakwunye, 6FT POWER CORD dị ogologo iji ruo oghere mgbidi dị mma. Igwe SMART AUTO SHUT-OFF na-eme ka nchekwa kachasị elu n'oge niile mgbe mmiri na-agba.
Seramiiki + osisi siri ike
6.08 fl .oz
Na-aga n'ihu / Na-aga n'ihu
SP-L30 400ml amazon osisi ọka ultrasonic a ma ama na-esi ísì ụtọ mmanụ dị mkpa
SP-E019 SOICARE akọrọ batrị ejikwara Micro alụlụ waterless mkpa mmanụ diffuser
SP-WBL07-S 3D iko elektrik na-esi ísì ụtọ wax tart warmer oil burner